कुन भोजन उत्तम शाकाहार र मांसाहारमा ? - ज्ञानविज्ञान
हाम्रो स्वास्थको स्वास्थको सहयोगमा ।
Topics #भोजन #शाकाहार
Don't Miss it यस्ता गल्ती जुन तपाईं हरेक दिन त गरिराख्नु भएको छैन ?
Up Next यसरी स्याहार गरे बिग्रन्न छाला; जान्नुहोस्